Ị ga-achọ iji bulite profaịlụ gị na mpaghara ị họọrọ, onye ọ bụla nwere ike ịmara onye ị bụ na ihe ị na-eme, ị maghị ebe ga-esote.
Ahịa n'ozuzu pụtara ịnweta ozi gị na ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee n'ọtụtụ ụzọ dịka o kwere mee. Ihe niile ị na-eme ndị ọzọ ahụ na-ahụ nwere ike ịre ahịa maka ahịa n'ihi na ị na-ekwurịta okwu na ụwa n'ọtụtụ ụzọ mgbe niile.
Ụzọ i si eji ejiji, ime ihe, ikwu okwu na ịgwọ ndị mmadụ ga-enwe mmetụta na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma, ị ga-enyocha ụzọ kachasị mma isi mee ihe ndị a maka ebe ị na-arụ ọrụ na ihe mgbaru ọsọ gị.
Onye nduzi n'ozuzu ga-abụ iji hụ na ị na-emeso onye ọ bụla ihe n'ụzọ nkwanye ùgwù, jiri nlezianya na nghọta nke mkpa ụmụ mmadụ. Ndị mmadụ na-achọ ihe si na mmekọrịta nile na ụzọ kachasị mma iji nweta oge siri ike bụ ime ka onye nke ọzọ chee na ị dịghị eche banyere ha na mkpa ha.
Ị gha 'ịzụ' onwe gị n'oge niile, cheta ihe ị chọrọ ime & mee ihe n'ụzọ ga-eme ka ha nwekwuo ike. Ọ bụghị ihe ị nwere ike ime 9 gaa na 5 wee pụọ n'abalị ma merie ya niile site na ime onye nzuzu, dị ka m kwuru na ị maghị ebe ebe ọzọ ga-esi na onye na-ekiri.
Mee ka ọ dị mfe ịkwusa ozi gị site n'inweta kaadị azụmahịa, ọ bụrụgodị na ha sitere na igwe na-ere ahịa ha nwere ike ịdị ọcha ma dezie, nwee aha gị, nọmba na ozi dị mkpirikpi ma ọ bụ aha ha na-akọwa ihe ị na-eme. "Ana m azụta ihe onwunwe ngwa ngwa" ma ọ bụ "Ngwongwo Ngwongwo" ngwa ngwa na-etinye uche nke onye nabatara ihe ị na-eme. Mee ka ahịa bụrụ àgwà, jụọ mgbe niile ihe ndị mmadụ na-eme ma gosipụta mmasị ha, nweta kaadị ha maka aha n'ọdịnihu, kwuo ihe ị na-eme ma nye ha kaadị - mee nke a na onye ọ bụla ị zutere na ị ga-eju anya na nsonaazụ.
Akwụsịla ịkwalite profaịlụ gị, mgbe oge siri ike, ọbụlagodi ka ọ dị mkpa ka ị tinye onwe gị n'ọnọdụ ma bụrụ otu mgbe oge dị mma ghara ịkwụsị ịkwalite onwe gị na ihe ị na-eme.
Ọrụ nke ụbọchị: Tinye Marketing mbụ